Hordhac: Qormadaan waxaa ay ka koobnaan doontaa laba qaybood. Qaybta kowaad oo aan halkaan kusoo bandhigi doono waxaa aan kaga faaloon doonaa maamulka iyo maareynta wanaagsan. Waxaan si gaar ah u eegi doonaa qaabka si wanaagsan loogu hogaamin karo; shirkad yar, mid weyn ama hayàd dowli ah. Waxaan soo qaadan doonaa taariikh gaaban oo ku saabsan heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray nidaamka maamulka iyo maareynta. Taasoo aan garab dhigi doono taariikhda islaamka iyo waxa ay ka qortay maamulka iyo maareynta fiican. Dadka soomaalida ah oo lagu tiriyo dad aad ugu fir-fircoon dhinaca ganacsiga ayaa waxaa lagama maarmaan ah iney wax badan ka ogaadaan qaabka ama nidaamka wanaagsan ee loo maamuli karo shirkad ama hayàd dowli ah. Shirkadu waxaa ay noqon kartaa mid yar oo ay ka shaqeeyaan laba qof ama mid aad u weyn oo ay ka shaqeeyaan dad badan
Taaiikhda maamulka iyo maareynta oo kooban
Haddii aynu dib u raacno qaabkii ay wadamada reer galbeedku shirkadaha u maareyn jireen, waxaa inoo soo baxaysa taariikh ay ku dheehan tahay keligii talis iyo qof jeclaysi. Muddo haatan laga joogo boqol ilaa laba boqol oo sano, waxaa shirkad walba u talin jirey qofka ama dhowrka qof ee iska leh. Shirkada iyo shaqaalaheedaba waxaa loo maamuli jirey sidii badeecad qofku iska leeyahay. Shaqaalaha shirkada ama wersheduna waxaa ay ku khasbanaayeen iney si hargar laàan an u fuliyaan amarka madaxda.Qofka shaqaalaha ah oo dhiibta fikirkiisa ama dhaleeceeya madaxa shirkada, waxaa markiiba laga cayrin jirey shaqada. Madaxda shirkaduhu waxaa ay dhiibi jireen awaamiir aad u qalafsan oo aan mararka qaarkood la fulin karin. Shaki badan ayey ka qabeen in shaqaaluhu hayshooda gudan karaan haddii aan lagu hayn ilaalin joogto ah. Taas waxaa caddeyn u ah qaab-maamulkii uu dejiyey ninkii mareykanka ahaa ee la oran jirey: fredrick Winslow Taylor. Ninkaas waxaa uu aad uga hadli jirey wax badana ka qoray qaabka shirkadaha iyo wershedaha loo maamulo. Taylor waxaa uu aaminsanaa in haddii aan shaqaalaha la ilaalin, lana siin amaro qeexan aaney si habsami ah u gudaneynin hawshii loo diray. Taylor waxaa uu qabey in Baniàadamku kolka uu shaqo gudanaayo la yimaado calaamadahaan.
Qish dabiici ah: Taas oo macnaheedu yahay qofka shaqeynaaya oo aan is dhibin, balse hadba taako qaada oo shaqada qabta hadba inta uu ka gaaro. Qofka shaqaalaha ahi isma saaro wax dhib ah oo culus.
Qish qorsheysan: Shaqaalaha ama qof kasta oo bani àadam ahi waa xisaabtamaa. Mana jiro qof isa saaraaya masuuliyad iyo shaqo dheeraad ah. Qofku waxaa uu marwalba eegayaa waxii isaga naftiisa dani ugu jirto.
Taylor isagoo cuskanaaya labada qodob ee aan soo sheegnay ayuu waxaa uu soo saaray aalad-maamul oo lagaga hortago dhibaatada ay keeni karaan qodobadaas. Taylor waxaa uu leeyahay haddii aan dadka shaqeynaaya la ilaalin lana howl gelin ma aha kuwo kasoo baxaaya howshooda. Waxaa uu dejiyey qaab-maamul oo salka ku haya ilaalin iyo amar. Waxaa ka mid ahaa in lala socdo qofku kolka uu shaqada soo galo iyo kolka uu ka baxo. Waxaa taylor shirkada u kala qaybiyey unugyo iyo waaxyo si ay u sahlanaado maamulku. Waax walbana waxaa uu u sameeyey qof horjooge ah. Halkaas waxaa kaaga cad in maamulka shirkada iyo hayàdaha uu soo maray heerar kala duwan.Ugu dameyna uu soo gaaray halka uu maanta maraayo. Iyadoo ay maanta wadamada horay u maray ay qoreen buugaagta maamulka iyo maareynta intooda badan, ayna ku faanaan iney meel fiican ka gaareen maamulka wanaagsan. Walow muddo boqol sano ka hor ah ay u dhaqmi jireen sida aan kor ku soo xusnay.
Kolka aad dib u eegto taariikhda islaamka,kitaabka quraanka iyo sunnadii rasuulkeena ( csw) waxaa kuu muuqanaya in maamul wanaagu ka mid yahay waxyaalaha la faray qofka dad madax u noqonaaya. Madaxnimadu waxaa ay noqon kartaa mid wadan, gobol, degmo, xaafad, waax, ama shirkad. Muddo ka badan kun iyo afar boqol oo sano ayaa islaamku ka hadlay maamul wanaaga iyo hogaaminta suuban. Waxyaalaha maanta ay hogaamiyayaasha shirkadaha reer galbeedku cuskadaan, Sida: Hogaamin toosan ( good leadership), wada tashi (Consultation and Joint Planning) iyo wada shaqeynta ( teamwork), waxaa uu islaamku ka hadlay muddo ka badan 1400 oo sano. Tusaale ahaan ilaahay subxaanu watacaalaa waxaa uu quraanka kariimka ku yiri: Waxaa laydin farayaa inaad kolka aad wax qabaneysaan wada tashataan ( shuurah). Waxaa kaloo uu islaamku meelo badan kaga hadlay muhimada ay leedahay in dadku iskaashado ( teamwork). Ummada islaamka oo dhana waxaa lagu sheegay iney yihiin hal jir oo isku mid ah. Rasuulka (csw) waxaa uu ahaa mid aad u dhegeysta oo qiimeeya qof walba, ha yaraado ama ha weynaado.
Haddaba maanta waxaa nasiib daro ah in maamulkii fiicnaa ee aan reer galbeedka kaga horeyney aan inagu ka tagnay oo qaadanay kii keligii taliska ku saleysnaa ee ay iyagu ka tageen. Taasoo keentay in maamul kasta oo fiican la yiraa waxaa iska leh oo keenay reer galbeedka, walow ay xaqiiqdu tahay in maamul wanaaga uu asalkiisii ka soo jeedo diinta islaamka.
La soco qaybta labaad oo ku saabsan: shuruudaha iyo astaamaha laga doonayo hogaamiyaha wanaagsan..
Qore: Cabdirisaq Maxamed Xuseen, Eskilstuna,Sweden
Faafin : SomaliTalk.com | July 16, 2009